Afaan Arabaan odeeffannoo tamsaasuuf OMN sagantaafate balaaleffatuun dogoggora – Welcome to bilisummaa
Afaan Arabaan odeeffannoo tamsaasuuf OMN sagantaafate balaaleffatuun dogoggora
Sab-qunnamtii Oromoo kamiyyuu kan Oromiyaa, Oromoo fi qabsoo Oromoo tan haqaa
addunyaa barsiisu irratti olola oofuunii fi balalleeffatuun dogoggora hiriyyaa hin qabne. Qabsoo
haqaa, qabsoo saba koloneeffatamee fi biyya koloneeffatamee ti. Oromoon saba
koloneeffatame; Oromiyaa biyya koloneeffatame. Qabsoon Oromoo, qabsoo bilisummaa fi
walabummaa ti. Qabsoo sabummaa ti; qabsoo biyyummaa ti. Kanaaf, qabsoon kun qabsoo
haqaa ti. OMN Afaan Arabaatiin Oromiyaa, Oromoo, aadaa, fi qabsoo bilisummaa Oromoo
ibsuu fi barsiisuu jalqabee jiraatuun isaa ifaa dha. Kun waan Oromoon hawwuu fi jaalatu.
Sagantaa nama boonsuu fi gammachiisu. Gama biraatiin ammoo, nam-tokkee fi garreewwan
sagantaa kanatti hin gammanne duula balaaleffanaa irratti oofaa jiraatuu isaaniituu argina.
Sab-qunnamtiin Saba kamiiyyuu, Saba, qabsoo saba isaa fi biyyaa isaa addunyaa barsiisuun
waanuma seenaa saboota qabsoo godhanii kamiyyuu keessatti godhamaa ture. Sab-qunamtiin
meeshaa barumsaa ti. Ija sabaa isaa ti. Abukaatoo sabaa isaa ti. Akkasumaas, sab-qunnamtiin
tokko Saba isaatiif gargaarsa argmsiisuuf ta’ee, mararfannaa horachuufiis ta’ee ykn akka
sabootni sun diina saba isaa hin deegarreefiis ta’ee Afaan biyyoota sanaatti fayyadamuudhaan
barsiisuun barbaachisaa dha. Kun waanuma adunyaan ittiin fayyadamaa turee fi jiru. Waan
haarawaa miti. Kanaaf, OMN kanarratti saganteeffatuun isa waan eebifamaa dha;
jajjabeeffamuu fi leellifamuullee qabaas. Kun qabsoo bilisummaa Oromootiif akka balaatti
ilallamuu odoo hin taane, akka milkaawwinnaa fi injifannotti ilaalamuu qaba.
Haata’u malee, har’a sagantaa OMN Afaan Arabaatiin biyyoota Afaan kana dubbataniif darbsuuf
saganteeffatuu isaa irratti kanneen dantaa yeroo, kan murna isaanii malee hegeree qabsoo
bilisummaa Oromoo ifduratti hin laalle qabsoo bilisummaa Oromoo dhimma amantiin walitti
hidhanii ummata Oromoo walitti buusuuf olola hamaa fi hammaata oofaa jiraachuun isaanii ifa
ta’ee jira. Fedhiin murna kanaa ykn nam-tokkee kanaa Afaanii fi amantii walitti fiduudhaan,
ummata Oromoo jiddutti shakkii, mama, garaagarummaa fi jibbansa ummuuf yaalii godhmaa
jiru. Dhugaan himamuu qabuu fi lammiiwwan Oromoo hubatuu qaban, xiyyeeffannaan
farreewwan kanaa tokkummaa Oromoo diiguu, qabsoo bilisummaa Oromoo dhageettii
dhoogguu, ukkamsuu, laamshessuu fi dhabamsiissuf yaalii fi tattaafii godhaa jiru; godhaallee
turan. Kana dura dhaabatamuun, dirqama lammummaa ti.
Dhugaan lafa jiru, Afaan Arabaa Afaan ummata bala’a naannoo Oromiyaa jiraatuu ti. Addunyaa
keessa, ummata miliyoona dhibba afurii fi digdamatu Afaann kana dubbata. Naannooma
Oromiyaa duwwaa ummata miliyoona heddutu Afaan kana dubbata. Afaan isaaniitiin waayee
Oromiyaa, Oromoo fi qabsoo bilisummaa Oromoo isaaniif ibsuun, himuun, fi isaan barsiisuun
dhimma amantii miti. Afaan Arabaatiin sanyii duguggaa, hidhaa, guraarasa, ajjeechaa,
hacuuccaa, saamiinsaa fi hiyyummaa gadaddoo, Wayyaaneen Oromoo fi Oromiyaa irratti
raawwataa jirtu, saboota Afaan Arabaa dubbatuuf himuun yakkaa miti; balaa dalaguu miti;
amantiillee miti. Akkuma beekkamu, waggoota hedduuf Suudaan qabsoo keenya deeggaraa fi
mararfataa ture. Kuniis kan ta’eef, waayee keenya Afaan ummatni Suudaan dubbatu Afaan
Arabaatiin waan itti ibsameef. Biyyootni kolonii Awroppaa jalatti kufan, waggoota qabsoo
bilisummaa isaanii godhaa turan, Afaanuma koloneeffataatiin saboota lammii koloneeffatatti
himaa turan. Oromoonis, kanumaaf wanti Afaan Amhaaraatiin Amhaaraa fi saboota impaayera
Itoophiyaa keessa jiraatan kan Oromiffaa hin beekneef wanti himamaa jiruuf. Sab-qunnatiin
saba kamiiyyuu, rakkinna saba isaa, saba gara biraatiif Afaanuma saba saniitiin ibsuun balleessaa
miti, sirii dha malee.
Lammiiwwan Oromo kan beekaas ta’ee ykn odoo hin beekin OMN Afaan Arabaatiin
odeeffannoo tamsaasuu kan balalleeffataa jirtan diqqoo dhaabatanii odoo ittiyaadanii bareedaa
dha. Balaaleffanaan kun gara makmaaksa Oromoo: “Horii abbaan gaafa cabse, ormi ija
balleessa” jedhutti akka nu geessine, of eegganoo guddaa gochuun barbaachisaa dha. Har’a,
Wayyaaneen gaafa OMN bu’uurfamee odeeffannoo Oromiyaa keessa tamsaasuu jalqabee, itti
duulaa turuunii fi ammaas itti duulaa jiraatuun ifaa dha. ‘Dish’ Oromoon odeeffannoo
Televiziyoona OMN dabarsuu dhageeffatuuf qaban mana isaanii irraa caccabsaa akka turte waan
irraanfatamuu miti. Amma ammoo, OMN Afaan Arabaatiin odeeffannoo Oromiyaa kan olaa
Oromiyaa jiraatan kan dhiyootii fi kan fagootiifiis waayee Oromoo fi Oromoo dhageesisuuf
saganteeffanaan, Wayyaaneen sadarkaa ol’aanatti duula hamaa irratti bobbaaftee oofaa jirti.
Lammiiwwaan Oromoo kan sagantaa OMN balaaleffataa jirtan, balaaleffanaan kun diina
Oromoo Wayyaanee wajjiin akka isin dhaabaa jiru hubatuu qabdan. Kanaaf, dhaabatamee,
yeroon fudhatamee ittiyaaduun barbaachisaa dha.
Gabaabamatti, lammiiwwan Oromoo dhaabbii dhaabataa irkoo qabsoo bilisummaa Oromootiif
ta’u qabaachuun barbaachisaa dha. Deegaruunis ni feessa. Dura dhaabatuun, mormuun fi
abaaruun furmaataa miti. Haala akkanaa irraa of qusachuun barbaachisaa dha. Kanaaf, qabsoo
bilisummaa Oromoo addunyaa hubbachiisuu fi barsiisuuf OMN hamma humni isaa danda’etti
Afaan hundaan waayee Oromoo fi Oromiyaa dabarsuun qabsoo bilisummaa Oromoo gargaara
malee hin miidhu.
Oromiyaa NI Bilisoomti!
Previous Partisanship vs neutrality
Next BARRI KUN BARA OROMOO FI OROMIYAAN MILKAAWAN HAA TAHU